“Kylian Mbappé wuu ka duwan yahay dhamaan ciyaartoyda kale aan lasoo kulmay”… Raphael Varane – Gool FM
“Kylian Mbappé wuu ka duwan yahay dhamaan ciyaartoyda kale aan lasoo kulmay”… Raphael Varane
(France) 18 Luulyo 2018. Raphaël Varane ayaa ku tilmaamay saaxiibkiis isku dalka kasoo wada jeedaan ee Kylian Mbappé inuu yahay xidig ka yimid duunyo kale. Kadib markii ay ku wada guuleysteen koobka aduunka 2018.
Kylian Mbappé ayaa si weyn kaga caawiyay xulka qaranka France in ay ku guuleystaan koobka aduunka , kadib mudo dhan 20 sano tan iyo sanadii 1998-dii.
Mbappé ayaa ku guuleestay abaal marinta da’ayarkii ugu fiicnaa tartanka koobka aduunka 2018 ee dhawaan lagu soo gaba gabeeyay dhawaan.
Varane ayaa dhawaan la hadlay wargeyska “L’Equipe” ee dalka France wuxuuna amaan kala dul dhacay da’ayarka reer France Kylian Mbappé.
“Mbappé waxay ila tahay inuusan ahayn koonkan, isla markaana uu ka yimid koonkale, waxaan la kulmay ciyaartoy badan ee aad u wanaagsan, balse Kylian wuu ka duwan yahay”.
“Mbappé wax walba si dhaqso ayuu u fahmayaa, marka aan kala hadlayo arimo badan kulanka kahor, uma baahni inaan dhameystiro hadalkeyga, waxaan horey ka arkaa isagoo fahansan isla markaana sameenaya waxa aan ka dalbaday”.
Alisson Becker oo u soo duulay magaalada Liverpool si uu u maro tijaabada caafimaadka +SAWIRRO
Cristiano Ronaldo oo burburiyay qorshaha kooxaha Manchester United iyo PSG